Mohaammad Adamoo: 'OBN cimsuuf karoora bal'aa qabna turre' - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Mohaammad Adeemoo (Facebook)
Gaazexeessaa Mohaammad Adamoo ji'a sadiin dura Caffee Oromiyaa duratti dhiyaatee OBN gaggeessuuf waadaa gale
Ji'a sadii dura hoogganaa Oromiyaa Biroodkastiing Neetwoork (OBN) ta'uun muudamee kan ture gaazexessaa Mohaammad Adeemoo mootummaan aangoo kanaa oliifin si barbaada jechuun bakka turerraa isa kaasuu BBC'tti himeera.
Muuxannoo ogummaa gaazexessummaa biyyoota hambaatti horateen jijjiirama guddaa fiduuf karoorsee karoora isaa hojiitti hiikuu wayita eegalu achii ka'uutti gadduus dubbateera.
OBN keessatti gaggeessitoota daddafanii jijjiiruun kan baramedha kan jedhu Mohaammad, ogganoota waggaa lamaa keessatti jijjiiramaniif inni saddetteffaadha.
Gaggeessummaa OBN irraa jijjiiramuun isaa fedhii isaatiin ala akka ta'es ni dubbata Obbo Mohaammad Adamoo .
"Dhugaa dubbachuudhaaf ani ji'a sadiidhaafan hojjedha jedhee miti kanan deeme. Karoora bal'aafi dheeraa miidiyaa kana uummata Oromoo biraan gahuudhaaf, dandeettii hojjetoota keenyaa cimsuudhaaf karoora bal'aa qabna turre.
Haata'u malee, fedhiifi kallattiin mootummaan ittiin deemu yeroo adda addaatti ni jijjiirama waan ta'eef fedhii keenyaan osoo hin taane fedhii mootummaa irratti hundaa'uudhaan bakka sana namni buufamee jira."
Miidiyaan kun kan uummataati, gibira uummata Oromootiin dhaabbatee irra caalaas jiraachaa waan jiruuf kaayyoon keenya inni guddaan amma achi turetti miidiyaan kun keessa galtummaa mootummaatiifi dhaabbilee adda addaatiirraa walaba ta'ee miidiyaa uummataa kan akka BBC, NPR kan Ameerikaafaafi kkf'tti dhiibuu barbaachisa jedha Obbo Mohaammaad.
Akka Mohaammad jedhutti mootummaan hin dhufaa ni darbas, dhaabni biyya bulchu tokko ni jijjiirama, uummanni garuu uummata hin jijjiiramu. Mootummaan yeroo ammaa dhaabbileen gara garaa yeroo hundeessaatti fuulleffatee jirutti, miidiyaa dhaaba irratti hin hudoofne ijaaruun barbaachisaadha.
"Sanaafis hanga dandeenye carraaqnee jirra. Garuu yeroon gahaa waan hin turreef hanga barbaadame deemuun hin danda'amen. Karooraafi mul'ata keenya hojiitti hiikuu hin dandeenye. Haala mijeessurra turre. Ji'a sadii keessatti hoomaa waanti hojjettu hin jiru, haala mijeessinee hojiitti gaafa gallu ture."
'Mootummaan kallattii biroodhaan deemuu barbaade'
Akkaataan namni OBN hoogannu bakka isaa bu'ellee ifa miti jedha Obbo Mohaammad. "Namni bakka bu'eeman dhaga'e malee xalayaadhaan miti kan na beeksisan."
Fedhii mootummaan qabu natti himanii turan kan jedhu Obbo Mohaammad fedhii sana irratti yaada isaa kennee osooma jirruu namni bakka bu'uun dhaga'e jedha.
Gaaffii sababii bakka sanaa isa kaasaniif ifatti kan beeku yoo jiraateef gaafatamee, "Mootummaan kallattii biroodhaan deemuu barbaade, kana caalaa baayyee jechuu hin barbaadu" jedhe.
Uummanni dhimma kana irratti waan gara garaa haasa'aa waan jiruuf, iftooma uumuudhaaf garuu waajira dhaabaa ODP keessaa namoonni muraasni hojii nuti hojjechaa turre irratti komii dhiyeeffachuu isaanii akka beeku yaadachiiseera jedha Mohaammad.
'Kallattii koree miidiyaa'
"Duulli adda addaa karaa nama lama sadii deddeemaa turuu isaa nan beeka.
Sababiin isaas waajirri dhaabaa kan inni barbaadu torban torbaniin hooggantoota OBN walitti qabanii kallattii miidiyaan kun ittiin hojjechuu qabu kallattii kan kennan koreen miidiyaa kan jedhamu akka OBN hirmaatu fedhii qabaachaa turan."
Dhimma kana irratti ammoo labsiidhaafi seera biyyaatiin kan daangeffame dhaabni tokko miidiyaa walabaa, miidiyaa uummataa keessa galee kallattii Iditooriyaalii kennuun aadmaleedha jedhanii akka manaajimantiitti murteeffatanii akka turanis ni kaasa Obbo Mohaammad.
"Murtii sana irraas namoonni akka gammachuu hin qabne nan beeka. Dubbichi achi irraa ka'a garuu isa sanaaf na kaasan jedhuudhaaf odeeffannuu guutuu hin qabu.
Kan anatti himame garuu mootummaan bakka biraatti akka na barbaadeefi hojiin amma hojjechaa jiru kanaan olitti bakka biraa deemee akkan hojjechu danda'u kallattii kaawwatanii nama akka buufatan kanan dhaga'e."
"Ka'umsi dubbii isaa ammoo komii waajira dhaabaa ta'uu ifa osoo ta'ee gaariidha, sababiin isaas yaada burjaaja'e adda addaatu deemaa jira waan ta'eef. "
Mohaammad Adamoo daariktera OBN tahuun muudaman
Hojiiwwan jijjiiramaa jalqabe osoo hin xumuriin kaafamuu isaatti miirri gaddaa akka itti dhaga'ame himeera Mohaammad.
Dirqamni kun dirqama uummataati jedheen wareegama kaffaleen deeme.
Maatii koo dhiiseen hojii guddaa sanaa ol dhiiseen deeme. Ergan deemes waan baayyee hojjechuudhaaf haala mijeessinee jirra.
Mul'ata baayyee bareedaa kan Oromoonis jaallate kan goodinaaleen Oromiyaa hundi yoo xiqqaate FM mataa isaanii akka qabaatan karoorfannee socho'aa turre. Miidiyaalee naannoo biroo waliin hariiroo uummachuudhaaf socho'aa turre.
Leenjii adda addaa hojjettoota keenyaaf ji'a ji'aan kennuudhaaf karoorfannee turre. Leenjiinis kennameera.
Yeroo jalqabaadhaaf erga dhaabbanni kun dhaabbatee Ambaasaddarri Ameerikaa OBN dhufee OBN walii wajjin ta'uudhaan embaasiin Ameerikaa leenjii kennaa ture. Karoora bal'aa lafa hin qabsiisiin hafne. Kanaaf baayyyeen gadde."
Akka Mohaammad jedhutti, miirri naamusa oogummaa, walii galanii hojjechuufi obbolummaa haala kanaan dura argamee hin beekneen uumamee ture OBN keessatti.
"Hojjetoonni hedduu dhama'aa turan. Anis ammoo baayyeen waadaa isaaniif galeen ture. Garuu badhee irratti yeroon isaan dhiisee deemu baayyee natti dhaga'ame."
Murteen kun amantaa qaama jijjiirama biyya keessatti dhufaa jiru hoogganu irraa qabdu hanga ta'e akka laaffatu taasiseeraa jechuun gaaffii BBC Afaan Oromoo gaafateef deebii yeroo kennu, "Akka ani yaadutti Oromoo hunda osoo gaafattee bakka hundaa deemtee jijjiiramni gubbaa jiru gadi hin buune jedhee sitti hima."
Jijjiiramni gubbaatti jiru akkuma jirutti ta'ee namoonni muraasni kan dhaaba keessa jiran, kan waan har'aa malee waan boruu yaaduu hin danda'iin karoora bal'aa, dheeraafi bilchaataa ittiin biyya kana ceesisuun danda'amu dagachuun waanuma har'aafi aangoof gareedhaan socho'u jedha.
Akka ramadamee biyya birootti deemaa jiruutti haasa'amaa ture garuu kun waanti murtaa'e akka hin jirres beekamuu qaba jedheera Obbo Mohaammad.
Gaazeexeessaa Mohaammad Adamoo waggoota dheeraan dura miidiyaa dhuunfaa marsariitiirraa OPride (as cuqaasi) jedhamu hundeessuun dhimmoota garagaraa irratti gabaasa hojjechaa tureera.
Bu'aan filannoo sadarkaa buufata filannoo naannootti Roobii fi Kamisa ibsama
Dubartiin hojjattuu manaa dararuun ajjeefte hidhaa waggaa 30'n adabamte